ကိုဗစ်-၁၉ ကာလအတွင်း သင့်ရဲ့ နေ့စဉ်လိုအပ်ချက်တွေကို Everyday Everything App ဖြစ်တဲ့ Grab အသုံးပြုပြီး ဖြေရှင်းလိုက်ရအောင် | Duwun
Grab က ခရီးသွားလာဆက်သွယ်ရေး၊ အစားအသောက်နဲ့ ကုန်ပစ္စည်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ ငွေရေးကြေးရေးနဲ့ အာမခံ ဝန်ဆောင်မှုတွေ၊ စားသုံးသူ လက်ထဲအရောက် ပို့ဆောင်ပေးတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေ၊ ဈေးဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေအတွက် ဝန်ဆောင်မှုတွေ စတဲ့ အမျိုးမျိုးသော ဝန်ဆောင်မှုတွေကို အက်ပလီကေးရှင်း တစ်ခုတည်းကနေ ဆောင်ရွက်ပေးနေတာပါ။ လူတွေအတွက် အဓိက အရေးပါတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေကို လက်တစ်ကမ်းမှာ လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ ရယူနိုင်အောင် Grab က သူ့ရဲ့ ဂေဟစနစ်ကြီး တစ်ခုလုံးကို တိုးချဲ့ခဲ့ပြီး ပိုကောင်းတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့ အသုံးပြုရတာ ပိုပြီး အဆင်ပြေအောင် ဖန်တီးပေးထားပါသေးတယ်။
အခုလိုမျိုး တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ခပ်ခွာခွာနေထိုင်ရတဲ့ အချိန်တွေ၊ လူစုလူဝေး ရှောင်ရှားဖို့ အိမ်ထဲမှာပဲနေရတဲ့ အခိုက်အတန့်တွေမှာ မြန်မာနိုင်ငံက လူအများစုဟာ ဈေးဝယ်ဖို့၊ ငွေရေးကြေးရေး ကိစ္စတွေ ဆောင်ရွက်ဖို့၊ ကျန်းမာကြံ့ခိုင်ဖို့၊ အချိန်တွေကို အကျိုးရှိရှိ ဖြတ်သန်းဖို့နဲ့ စိတ်အပန်းဖြေဖို့ မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းတွေကို ပိုပြီး အသုံးပြုလာကြတာ အဆန်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ App Annie လို့ခေါ်တဲ့ app store ပေါ်က အချက်အလက်တွေကို လေ့လာစုံစမ်းတဲ့ ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ တွေ့ရှိချက်အရ မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်း အသုံးပြုမှုဟာ နှစ်တိုင်း (၄၀%) လောက် ပုံမှန် တိုးလာရာကနေ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဒုတိယသုံးလပတ်အတွင်းမှာတော့ အက်ပလီကေးရှင်းတွေထဲမှာ လူတွေရဲ့ ငွေကြေးသုံးစွဲမှုဟာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၂၇) ဘီလီယံအထိ မြင့်တက်သွားပြီး စံချိန်သစ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ အနေအထားနဲ့ ကြည့်မယ်ဆိုရင် ရန်ကုန်နဲ့ မန္တလေးမြို့ကလူတွေ နေ့တိုင်း အသုံးပြုနေတဲ့ ထိပ်တန်း အက်ပလီကေးရှင်းတွေထဲမှာ Grab app လည်း တစ်ခုအပါအဝင် ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒါဆို ဘယ်လို အချက်တွေကြောင့် Grab ကို ရွေးချယ်အသုံးပြုလာကြတာလဲ၊ ကိုယ့်ရဲ့ နေ့စဉ်လိုအပ်ချက်တွေအတွက် Grab ကို ဘာကြောင့် အသုံးပြုသင့်တာလဲ ဆိုတာ ကြည့်လိုက်ရအောင်။
Grab ဆိုတာ Everyday Everything App တစ်ခု – အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုတည်းမှာ ဝန်ဆောင်မှုမျိုးစုံ ထည့်သွင်းပေးထားခြင်း
အရှေ့တောင်အာရှ ဒေသတစ်လွှားမှာ Grab အက်ပလီကေးရှင်းကို ဒေါင်းလုတ်ရယူ ထည့်သွင်းထားတဲ့ မိုဘိုင်းဖုန်းပေါင်း (၁၈၇) သန်းအတွက် Grab က ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါတယ်။ Grab က ခရီးသွားလာဆက်သွယ်ရေး၊ အစားအသောက်နဲ့ ကုန်ပစ္စည်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ ငွေရေးကြေးရေးနဲ့ အာမခံ ဝန်ဆောင်မှုတွေ၊ စားသုံးသူ လက်ထဲအရောက် ပို့ဆောင်ပေးတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေ၊ ဈေးဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေအတွက် ဝန်ဆောင်မှုတွေ စတဲ့ အမျိုးမျိုးသော ဝန်ဆောင်မှုတွေကို အက်ပလီကေးရှင်း တစ်ခုတည်းကနေ ဆောင်ရွက်ပေးနေတာပါ။ လူတွေအတွက် အဓိက အရေးပါတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေကို လက်တစ်ကမ်းမှာ လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ ရယူနိုင်အောင် Grab က သူ့ရဲ့ ဂေဟစနစ်ကြီး တစ်ခုလုံးကို တိုးချဲ့ခဲ့ပြီး ပိုကောင်းတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့ အသုံးပြုရတာ ပိုပြီး အဆင်ပြေအောင် ဖန်တီးပေးထားပါသေးတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ အတွက်ဆိုရင် ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ လည်ပတ်နေတဲ့ ဂေဟစနစ်တစ်ခု ဖြစ်နေမလဲဆိုတာ ဆက်ကြည့်လိုက်ရအောင်!
GrabFood – အိမ်နဲ့မကွာ လုံခြုံစွာ သန့်သန့်ရှင်းရှင်း သုံးဆောင်ပါ
ကိုယ့်ရဲ့ မိသားစုတွေနဲ့အတူ ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက် အိမ်ထဲမှာပဲနေရင်း အကြိုက်ဆုံး အစားအသောက်တွေကို တောင့်တနေပါလား? Grab အက်ပလီကေးရှင်းမှာ ရိုးရှင်းလွယ်ကူတဲ့ အဆင့် အနည်းငယ်ကို နှိပ်လိုက်တာနဲ့ မိနစ် (၃၀) အတွင်း ကိုယ်စားချင်တဲ့ အစားအသောက်တွေက အိမ်ရှေ့ကို ပူပူနွေးနွေး လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် ရောက်ရှိလာမှာပါ။ Grab ရဲ့ ရွေးချယ်စရာတွေ အများကြီး ရှိနေတဲ့ မိတ်ဖက်စားသောက်ဆိုင်တွေကနေ အရသာမျိုးစုံကို တစ်နေ့တစ်မျိုး မရိုးအောင် ရွေးချယ်နိုင်တဲ့အတွက် ဗိုက်ဆာနေရတဲ့ အချိန်တွေ ရှိတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်စားသောက်ဆိုင်တွေကမှာမှာ အခမဲ့ ပို့ဆောင်ပေးနေတဲ့ “JUSTEAT” ပရိုမိုကုဒ်ကို သုံးဖို့နဲ့ GrabFood မှာ ပေးနေတဲ့ အတန်ဆုံး အစားအသောက် ပရိုမိုးရှင်း အစီအစဉ်တွေကို စောင့်ကြည့်ဖို့တော့ သတိပေးချင်ပါတယ်။ အခုလို ခက်ခဲကြပ်တည်းနေတဲ့ အချိန်မှာ GrabFood အော်ဒါ တစ်ခုချင်းစီဟာ မိတ်ဖက်စားသောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင် တစ်ဦးချင်းစီအတွက် အထောက်အပံ့ ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်း မမေ့ကြပါနဲ့ဦး။ သူတို့ကို တစ်ဖက်တစ်လမ်းက ကူညီဖို့ ကိုယ်မှာတဲ့ ဈေးခြင်းတောင်းထဲကို အော်ဒါတွေ ပိုပြီး ထည့်လိုက်ကြရအောင်!
GrabMart – အပူအပင်ကင်းစွာ ဈေးဝယ်ပါ
GrabMart ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ ဈေးဝယ်ထွက်ရတဲ့ ခံစားမှုက စတိုးဆိုင်တွေ အများကြီးထဲမှာ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကို အလွယ်တကူ စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်လို့ တစ်မျိုးပျော်စရာကောင်းတဲ့အပြင် မိနစ် (၃၀) အတွင်း ကိုယ်မှာထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကို အိမ်အရောက်ပို့ဆောင်ပေးမှာဆိုတော့ ကိုဗစ်-၁၉ ကြောင့် စိတ်ပူနေရတာတွေကို တစ်နည်းတစ်ဖုံ လျော့နည်းစေမှာပါ။ GrabMart မှာ နေ့စဉ်လိုအပ်တဲ့ အိမ်သုံးပစ္စည်းတွေ၊ လတ်ဆတ်တဲ့ အသီးအရွက်နဲ့ အသားငါးတွေ၊ အလှကုန်တွေ၊ တစ်ကိုယ်ရေသုံးပစ္စည်းတွေ၊ ကျန်းမာရေးအတွက် ဆေးဝါးတွေ၊ စာရေးကိရိယာတွေအပြင် ခွေးစာ၊ ကြောင်စာ စတာတွေအထိ ဝယ်လို့ရနေပါပြီ။ GrabMart နဲ့ ဈေးဝယ်ထွက်ရတဲ့ ကောင်းတဲ့အချက်ကတော့ စတိုးဆိုင်မှာ ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ် ဝယ်ယူနေတဲ့အတိုင်း ပစ္စည်း အစစ်အမှန်တွေကို အမြန်ဆုံး ပို့ဆောင်ပေးဖို့ အာမခံထားတဲ့ အချက်ပါပဲ။
GrabProtect – ကိုယ်စိတ်ချမ်းသာ သွားလာပါ
ပုံမှန် သွားလာလှုပ်ရှားမှုတွေကို အနည်းဆုံးဖြစ်အောင် လျှော့ချနေရချိန်မှာ Grab ရဲ့ နေ့စဉ် ပိုမိုဘေးကင်းလုံခြုံစေရေး ကတိကဝတ်အတိုင်း GrabProtect ဆိုတဲ့ အငှားယာဉ်ဝန်ဆောင်မှု အသစ်ကို စတင်လိုက်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံး အဆင့်သတ်မှတ်ချက်တွေရှိတဲ့ ကျွမ်းကျင် ယာဉ်မောင်းတွေ ဝန်ဆောင်မှုပေးမယ့် GrabProtect ကို အသုံးပြုတဲ့ ခရီးသည်တွေအတွက် သူတို့ထိုင်မယ့် နောက်ခုံနဲ့ ယာဉ်မောင်းကြားမှာ ပလတ်စတစ်အကာတစ်ခု ခြားပေးထားပြီး ရောဂါပိုးကူးစက်ပျံ့နှံ့မှု နည်းနိုင်သမျှ နည်းအောင် ဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖောက်ထွင်းမြင်နိုင်တဲ့ ပလတ်စတစ်အကာ အကြည်အသုံးပြုထားတဲ့အတွက် ယာဉ်မောင်းနဲ့ ခရီးသည် အချင်းချင်း တွေ့မြင်နိုင်ပြီး မော်တော်ယာဉ်ရဲ့ လုံခြုံရေးကို ထိခိုက်စေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီခရီးစဉ်တွေအားလုံးဟာ မှတ်တမ်းမှတ်ရာ အပြည့်အဝ ရှိတဲ့အတွက် ထိတွေ့မှုလမ်းကြောင်း ပြန်လိုက်ဖို့ လိုအပ်လာရင်လည်း အကျိုးရှိရှိ အသုံးချနိုင်မှာဖြစ်လို့ ခရီးသည်တွေအနေနဲ့ စိတ်ချလက်ချ စီးနင်းနိုင်ပါတယ်။
ဒီလိုဆိုရင် Everyday Everything app လို့ ဆိုနိုင်တဲ့ Grab နေ့စဉ်သုံးအက်ပလီကေးရှင်းကို အသုံးပြုဖို့ အကောင်းဆုံးအချိန်က ဘယ်အချိန်ဖြစ်မလဲ? အဖြေကတော့ အခုအချိန်ကစလို့ နေ့စဉ်နေ့တိုင်းပါပဲ။ Grab က အသုံးပြုသူတွေနဲ့ သူတို့ချစ်ခင်ရသူတွေအတွက် ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေပေးရင်း အပြုံးတွေ ဖန်တီးပေးချင်ပါတယ်။ အားလုံးပဲ မိမိက စလို့ ဘေးကင်းလုံခြုံစွာ နေထိုင်ကြပါစို့။